Ngaba Ndifanele Ndiyenze Itattoo? | Ulutsha Luyabuza
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTiv IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba isi-Igbo
Yintoni ekubangela ufune ukuyenza?
Yiyiphi imibuzo ofanele uzibuze yona?
Yiyiphi imigaqo yeBhayibhile enokukunceda?
Umfana ogama linguRyan uthi: “Ndicinga ukuba iitattoo ngumzobo omhle.”
Isizathu sokuba wenze itattoo sinokuchaphazela indlela okujonga ngayo ukuyenza. Ngokomzekelo, uJillian ofikisayo uthi: “Enye intombazana endandifunda nayo yaswelekelwa ngumama wayo isencinci. Xa yaqalisa ukufikisa, yenza itattoo enegama likamama wayo entanyeni. Ndicinga ukuba itattoo enjalo ibonisa indlela eyayimthanda ngayo umama wayo.”
Enoba siyintoni isizathu, ufanele ucingisise kakuhle ngaphambi kokuba ugqibe ngokwenza itattoo! Yiyiphi imibuzo ofanele uzibuze yona ukuba ucinga ngokwenza itattoo? Yiyiphi imigaqo yeBhayibhile enokukunceda wenze esona sigqibo sihle?
Ziziphi iingozi ezinokubakho? Iwebhsayithi yeMayo Clinic ithi: “Iitattoo zonakalisa isikhumba, nto leyo ebonisa ukuba usenokuba nezifo neengxaki ezingakumbi.” “Ngamanye amaxesha amaqhakuva ekuthiwa ziigranulomas ajikeleza itattoo. Ukwenza itattoo kunokubangela amadyungudyungu ekuthiwa ziikeloid—akhula kwindawo enetattoo ngokungathi utshile.” Kwakhona, le webhsayithi ithi: “Ukuba izinto ozisebenzisayo xa usenza itattoo zichatshazelwe ligazi elinesifo, unokosulelwa zizifo ezosuleleka ngegazi.”
Inokuyichaphazela njani indlela abakujonga ngayo abantu? Uthanda ungathandi, indlela obonakala ngayo itheth’ into ngawe. Ibonisa ukuba ukhulile okanye usemncinci, uthembekile okanye awukhathali. USamantha ofikisayo uthi: “Nanini na ndibona umntu onetattoo, ngokuzenzekelayo ndimdibanisa nabantu abaselayo nabathanda imijuxuzo.”
UMelanie, ona-18, ubona nenye into. Uthi: “Kum, iitattoo zifihla ubuhle bakho bendalo. Kuba ngathi abo bazenzayo abafuni ukubonwa eyona nto bayiyo, ngoko bazifihla ngazo.”
Ngaba uza kusoloko uyithanda? Ekuhambeni kwexesha, ukutyeba okanye ukuguga kunokuyenza itattoo ifiphale ize itshintshe. Umfana ogama linguJoseph uthi “Ndizibonele ngala wam indlela ezibonakala ngayo iitattoo emntwini emva kweminyaka, azintlanga.”
UAllen ona-21 uthi “Iitattoo zidla ngokuphelelwa lixesha. Into ibikade ithandwa ngumnikazi wayo isenokungathandwa ekuhambeni kwexesha.”
UAllen unyanisile. Kaloku, njengoko umntu ekhula, indlela abona ngayo izinto iyatshintsha, ukhetho lwakhe luyatshintsha, nezinto azithandayo ziyatshintsha—kodwa zona iitattoo azitshintshi. Intombazana egama linguTeresa ithi: “Ukuba netattoo endikhumbuza ngeemvakalelo zobudenge asinto ebendingathanda ukuyiquka kwizinto endizisola ngazo.”
Umntu okhulileyo uqala ngokucinga ngazo zonke izinto ngaphambi kokwenza isigqibo. (IMizekeliso 21:5; Hebhere 5:14) Ngoko khawucinge ngale migaqo yeBhayibhile isebenzayo kumbandela weetattoo.
Kolose 3:20: “Nina bantwana, bathobeleni abazali benu ezintweni zonke, kuba oko kukholekile eNkosini.”
Ziziphi iimeko onokujongana nazo xa uhlala ekhaya nabazali bakho kodwa ungabathobeli?
1 Petros 3:3, 4: “Ukuhomba kwenu makungabi kokokulukwa kwangaphandle kweenwele nokokufakwa kwezihombo zegolide okanye ukunxitywa kwezambatho zangaphezulu—kodwa makube kokomntu ofihlakeleyo wentliziyo ofake isivatho esingenakonakala somoya ozolileyo nowobulali.”
Ucinga ukuba kutheni iBhayibhile igxininisa ‘kumntu ofihlakeleyo wentliziyo’?
1 Timoti 2:9: ‘Abafazi mabazihombise ngesinxibo ngokuthozama nangengqondo ephilileyo.’
Lithetha ukuthini igama elithi “ukuthozama”? Kutheni ukuthozama kunomtsalane ngakumbi kunokuzibhala emzimbeni?
Roma 12:1: ‘Yinikele imizimba yenu ibe yimibingelelo ephilayo, engcwele, eyamkelekileyo kuThixo, inkonzo ke leyo engcwele ngokwamandla enu engqiqo.’
Kutheni uThixo eyikhathalele indlela owuphethe ngayo umzimba wakho?
Emva kokucinga ngezi zinto kuthethwe ngazo, abantu abaninzi baye bakhetha ukungayenzi itattoo. Phofu ke, baye bafumana into ebhetele kuneetattoo. UTeresa, ekuthethwe ngaye ngaphambilana, uthi: “Ukuba kukho ibinzana okanye into oyithanda kakhulu okanye umntu obaluleke kakhulu kuwe, yiphile loo nto ithethwa lelo binzana okanye umxelele loo mntu indlela axabiseke ngayo kuwe. Kunokuba wenze itattoo, yiphile into oyikholelwayo.”
Cinga Ngaphambi Kokuba Uyenze